Jaakada Weyn ee Lithet Pallet PACH, Lithium koronto Pallet Palt | Staxx
Gawaarida gacanta ee gacanta
Buug-gacmeedka & Semi-korantada korantada
Waxaan leenahay koox iibin xirfadle ah
Waxaan leenahay kooxda adeegga iibka ee xirfad-yaqaannada
Waxaan leenahay koox maareyn xirfadeed
Waxaan leenahay kooxo xirfadle ah oo R & D ah
Waxaan leenahay koox wax soo saar xirfad leh
Wax cusub soo saar
Hal xalka oo loogu talagalay qalabka xarkaha xawaashka ee litheium pallet.
lithium-ra'iyi warshad Jack sariirtaada
lithium-ra'iyi qeybiyaha Jack sariirtaada
Adeegga hal-joog ah
Faa'iidooyinka xamuulka ee Staxx lithalt pallt:
1 Waxaan leenahay kooxda iibka lithalt ee 'litheret'
2 Waxaan leenahay kooxda adeegga iibka ee xirfad-yaqaannada
3 Waxaan leenahay koox maareyn xirfadeed
4 Waxaan leenahay xirfadle r&D Koox
5 Waxaan leenahay koox wax soo saar leh oo ah kooxda xamuulka xamuulka ah ee lithium
Kooxda Staxx waxay leeyihiin waayo-aragnimo hodan ku ah naqshadeynta iyo waxsoosaarka, kaasoo si buuxda u buuxin kara baahiyaha loo habeeyay ee macaamiisha. Waxay sidoo kale siin kartaa xalal loo habeeyey macaamiisha.
Staxx lithium pallet Jack wuxuu leeyahay awooda naqshadeynta, horumarka iyo wax soo saarka.
Fahmaysaa baahida dhabta ah ee dadka isticmaala-ka-isticmaalidda suuqa jacnalka ee lithat.
Imtixaanka iyo kormeerka ayaa bixiya la-hawlgalayaasheena Lithoum korantada ee korantada Pallet Pumplet.
Iskaashiga u dhexeeya macaamiisha iyo gawaarida xarkaha ee xarkaha ah ee lagu dhejiyay
Waxyaabaha xamuulka ah ee lithium pallet
Bixi Jaakada Lithium Pallet.
China Essis Essis ayaa taxanayadda lugta lugta korantada korantada ee korantada - Staxx
Staxx china Essis Essis Essica ayaa taxanayax ka soo saaraya lugta lugta korantada ee korantada - Staxx, waxaan leenahay koox iibin xirfadle ah.
Ugu fiican ee lugta lugta ee korantada ee ugu wanaagsan ee lugta lugta wanaagsan ee qiimaha wanaagsan - staxx
Staxx-ka ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'Staxx' ee ugu wanaagsan ee Qalabka Fudud ee Lugta Fudud - Staxx, iskaashiga dhexmara macaamiisha iyo maqaaxix waa la dhisan karaa. Waxaan jeclaan laheyn inaan ku-habeynno taageeradayaga, sida istaraatiijiyadda suuq geynta, adeegga iibka ee loo iibiyo baahiyaha la-hawlgalayaasheeda.
Loogu talagalay Ws Soosaarayaasha Iska Diyaariyaha Iftiim ee Isuduwaha ee Shiinaha
Staxx loo habeeyey waaxyada korantada ee khaaska ah ee ka soo baxay Shiinaha, tikniyoolajiyada aasaasiga ah ee gawaarida xamuulka korantada waa unugga awooda, oo ay ku jiraan mooto / gudbinta, kontoroole iyo batter. Staxx waxay awood u leedahay qaabeynta madaxbanaan, horumarin iyo soosaar qaybo muhiim ah, waxayna horseed u keentay horumarinta 48V tikniyoolajiyadda wadista wadista baabuurta ee loo diro. Teknolojiyaddan waxaa lagu tijaabiyay oo ay caddeeyeen Tüvv Rheinland hal tijaabo.
Warshad tayo leh oo tayo leh oo tayo sare leh
Warshad tayo sare oo tayo leh oo ka taxadaraya MRS oo tayo sare leh oo ah warshadda madaxa, waxaan heysanaa koox iibin xirfadle ah.
Nagu saabsan anaga - astaanta xamuulka xamuulka ah
Xirfad-yaqaannada Lithium Lithat Pallet Plet Cardhidka Qalabka Warehouse
Tan iyo markii dib-u-habeyn shirkada 2012, Staxx lithalt gawaarida xamuulka ah ayaa si rasmi ah u gashay qaybta wax soo saarka iyo qaybinta qalabka bakhaarka, sida lithium pallet gawaarida xamuulka, lithium pallt gawaarida korantada. Sanadkii 2016, shirkadda ayaa diiwaangashanaatay astaan ​​cusub "Staxx".
Iyada oo ku saleysan warshadda is-gaar ah, alaabada iyo nidaamka maareynta iyo maaraynta, Staxx waxay sameysay nidaam alaab-qeybiye oo dhameystiran, oo ay abuurtay meel hal-joog ah oo la siinayo, oo ka badan 500 oo ganacsato ah oo guriga jooga iyo dibedda.
STAXX SHIRKADDA DHISMAHA
Staxx lithium pallet pallet the Shirkadda shirkadda
XALALKA ODM Custom
Lithium sariirtaada JACK saarka
oolnimada sare& HIGH TAYO
Xaraashka xamuulka xamuulka xamuulka xamuulka ah iyo tijaabinta isku halaynta
Iibinta Xadhiga iyo Imtixaanka Isku-darka
Gawaarida xamuulka ah ee xamuulka qaada
Xaqiiji awoodda ka soo horjeedda ee ka hortagga iyo isku halaynta gacanta.
Xamuul xamuul xamuul ah oo xamuul ah&Tijaabada gaboobay ee shaashadda
Xamuul xamuul xamuul ah oo xamuul ah& Tijaabada gabowga ee LCD shaashadda, hubi fiidiyowga oo baro wax intaa ka badan!
Xamuulka xamuulka xamuulka ah ee xamuulka qaada
Gawaarida xamuulka ee xamuulka ah ee xamuulka ah ee kor u qaadida tijaabada jidadka ee jidadka, aynu eegno fiidiyowga oo aan waxbadan ka baranno!
Iska dhaaf AAD EMAIL AMA LAMBARKA TELEFOONKA ON FOOMKA LA XIRIIRKA KA SO waannu kuu adeegaynaa KARAA!
Xuquuqda daabacaadda © 2021 Ningbo Staxx Qalabka Maareynta Qalabka ee Qalabka ee CO.